डा.राजिव,‘जसले सुगमको सुविधा त्यागेर दुर्गमको सेवा रोजे’ – KarnaliPost Daily
डा.राजिव,‘जसले सुगमको सुविधा त्यागेर दुर्गमको सेवा रोजे’
७ आश्विन २०७८, बिहीबार १४:२३ September 29, 2021 by Karnali Post Daily
अशिक्षा,गरिबी र शसशक्तिकरणको अभावले कर्णालीका महिला पाठेघर खस्ने समस्याबाट ग्रसित थिए । न डाक्टर, न अस्पताल उपचार नपाएर अकालमै आमा बच्चाले ज्यान गुमाउनु पर्ने बाध्यता हालको एक दशक पहिले कर्णालीमा थियो ।
सरकारले खटाएका चिकित्सक पनि कर्णाली भन्ने बित्तिकै मुख बिगार्थे । जसका कारण डाक्टर नदेखेरै कर्णालीका अधिकांश गर्भवती,सुत्केरी,जेष्ठनागरिक र बालबालिकाले मृत्युवरण गर्नु पथ्र्यो ।
तर २०६८ सालमा जुम्लामा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पताल स्थापना भयो । त्यसपछि कर्णालीको स्वास्थ्य क्षेत्रले काचुली फर्ने आशा पनि पलायो । तथापी,विशषज्ञ डाक्टर आउन नमान्ने समस्या ज्युँका त्यु थिए ।
तर अप्रयाप्त औषधी उपकरण, न्युन सुविधा, जनशक्ति अभाव, भौगोलिक विकटता तमाम चुनौतीका बीच पनि तराइको राजविराज सप्तरी स्थायी घर भएका डाक्टर राजिव शाह कर्णालीको पिडामा मलम लगाउन, गुणस्तरी स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्न हिमाली क्षेत्र कर्णालीमा पुगे । जती बेला कर्णालीका गाउँगाउँमा मातृशिशु मृत्युदर उच्चनै थियो । पाठेघर खस्ने समस्या विकराल थियो । डर लाजले महिला आफ्ना समस्या लुकाएर ज्यानै गुमाउन बाध्य थिए ।
करिब २०७१ सालबाट कर्णाली प्रतिष्ठान संग आबद्ध भएका डा.शाहले त्यतिबेलाको कर्णालीको बेदना,रोधन, डाक्टर अभावका चित्कार देखेर कर्णालीका दुरदराज गाउँगाउँमा पुगेर निशुल्क पाठेघर सम्बन्धीको शिविर संचालन गरे ।
दुर्गम हुम्ला,डोल्पा,मुगु लगायत कर्णालीका १० वटै जिल्लाका गाउँगाउँमा पुगेर शिविर संचालन गर्नु आर्थिक,भौगोलिक,जनशक्ति र औषधी उपकरणका हिसाबले भने जतिकै सहज पनि थिएन् । तर (स्त्री तथा प्रसुती रोग विशेषज्ञ डाक्टर राजिव शाह) कर्णालीमा सेवा गर्ने दृढ इच्छा शक्ति र सेवा भावले सुगकमको सुविधा त्यागेर कर्णालीका दुर्गम गाउँगाउँमा सेवा गर्न जुम्ला पुगेको बताउँछन् ।
उनी भन्छन,“कर्णाली प्रतिष्ठान संग आबद्ध भएको ९ वर्ष र कार्यरत भएको ६ वर्ष भएको छ । यस बीचको अनुभव स्वास्थ्यका हिसाबले तराई र कर्णालीको अबस्था उस्तै छ । पहिलो कुरा त दुर्गमबाटै करियरको सुरुवात गर्दा अन्त सहजै काम गर्न सकिने सोच थियो । भने,दोस्रो कर्णालीमा भइरहेको मातृशिशु मृत्युदर घटाउन,पाठेघरको समस्याबाट पिडित महिलाहरुको पिडामा मलम लगाउने संकल्पले सुगमको सेवा सुविधा,बालबच्चा, घरपरिवार छोडेर दुर्गमको सेवा रोजेको हुँ ।”
कर्णालीमा डाक्टर जान मान्दैनन,भौगोलिक विकटता,सेवा सुविधा धेरै हुदैन् भन्ने थाहा हुँदा हुदैपनि कर्णालीमा सेवा गर्ने भावलेनै आएको हु । कर्णालीमा आउने इच्छा हुदा हुदैपनि वर्तमान उपकुलपति डा. मंगल रावलले कर्णालीमा केहि गर्नुपर्छ, जाउ भनेर दिएको हौसला, दबाबले कर्णालीमा आउन थप हौसिएको डा. शाहको भनाइ छ । विगतको तुलनामा कर्णालीको स्वास्थ्य अबस्था निकै सुधार भएको छ । प्रतिष्ठानले आफ्ना सेवा दुर्गमकेन्द्रीत बनाएको छ ।
डा.राजिव जसले पहिलो पटक जाजरकोटमा गर्भवतीको शल्यक्रिया गरे
त्यतिबेला रोग भोक,अशिक्षा कर्णालीको उपनाम थियो । जतिबेला कर्णालीमा डाक्टर थिएन्,ठुलै पेट दुख्दा पनि महंगोखर्चमा नेपालगन्ज काठमान्डौ धाउनुपर्ने बाध्यता थियो । अस्पताल जाँदा डाक्टर नभेट्निे सिटामोल पाउन मुस्किल हुने अबस्थामा सेता एप्रोनधारी डाक्टर देख्नु कर्णालीबासीका लागि एकदशक पहिलो कल्पना जस्तै थियो । तर डा. शाहले संघियतापछि गाउँगाउँमा निशुल्क पाठेघर शिविरलाई निरन्तरता दिदै हिमाली काख हुम्ला देखि डाक्टर पर्खिरहेको जाजरकोट सम्म पुगे ।
कर्णाली प्रदेश सरकारको (आमा तथा नवजात सुरक्षा कार्यक्रम) अन्तरर्गत कर्णालीका गाउँगाउँमा शिविर चलाउँदा लक्ष्य गरिएको भन्दा पनि बढी थाम्नै नसकिने संख्यामा विरामी आउँन्थे । अधिकांशको पाठघरको शल्यक्रिया गर्नुपर्ने भएकोले सबैलाई हेर्न सम्भव थिएन् ।
डेढ दुइ वर्ष पहिलेको कुरा हो, जतीबेला शिविरकै सिलसिलमा जाजरकोट पुग्दा एकजना गर्भवती महिला गम्भीर अबस्थामा भेटिन् ।
सानो उमेर भएका कारण बच्चा जन्माउन गाह्रो भएपछि हामीले स्र्पोर्टमै अप्रेशन गरी आमा बच्चा दुबै बचाउन सफल भयो । त्यो जाजरकोट जिल्लामै पहिलो अप्रेसन भएको केस थियो । त्यस अघि धेरै महिलाले अकालमै ज्यान गुमाउनु परेको हामीले सुनेउ ।
त्यस्तै, निशुल्क शिविरकै क्रममा गाउँ पुग्दा देखिने भिडलेपनि डाक्टर खोजिरहेको, उपचार अभावमा भौतारिरहेको नागरिकका समस्या दर्शाउथ्यो । त्यसैलेपनि संघिपछिका ४ वर्षमा निरन्तर कर्णालीका दरदराज गाउँमा आफ्नै नेतृत्वमा निशुल्क शिविर भइरहेकोको डाक्टर राजिव शाहले बताए ।
उनका अनुसार,पछिल्लो समय पाठेघर सम्बन्धीका समस्या लिएर आउने महिलाको संख्या घटेको छ । कपितयले समस्या लुकाउने संगै जनचेतना अभिबृद्धी,स्वास्थ्यको पहुँले पछिल्लो समय पाठेघर खस्ने समस्या घटेको डा.शाहको बुझाई छ । तर पनि समस्या लुकेर बसेका महिलाको उपचारका लागि कर्णाली प्रतिष्ठानले शिविर गाउँगाउँमा जारी राख्ने जनाए ।
डा. शाहको शल्यक्रियाबाट जसले पुर्नजन्म पाए
अस्पताल मन्दिर हो, डाक्टर भगवान हुन् त्यसै भनिएको हैन् । त्यो सावित कर्णाली प्रतिष्ठानका स्त्री तथा प्रसुती रोग विशषज्ञ डाक्टर राजिव शाहले गरे । कुनै बेला डाक्टर देख्नु,भेट्नु उपचार गर्नु त परै जावस अस्पतालको दर्शन नपाई ज्यान गुमाउनु पर्ने कर्णालीमा अहिले जस्तासुकै जटिल उपचार सहजै हुनु खुसीको कुरा ।
बितेको केहि महिना पहिले गुठिचौर गाउँपालिकाकी मनिषा कामीलाई सुत्केरी बेथा लागेपछि अस्पताल ल्याइयो । अस्पताल पगे लगत्तै म्याटानिटी वार्डमै मनिषाको मुटुको चालनै बन्द भयो ।मानिसको मुटुको चाल रोकिनु भनेको उसको सिधा मृत्यु हुनु हो । मनिषको मुटुको चाल रोकिएपछि उनका आफन्तले आशै मारिसकेका थिए ।
तर कर्णाली प्रतिष्ठानको स्रोत साधन र डा.राजिव शाह नेतृत्वको चिकित्सक टोलीको साहस,आट र विवेकले अप्रेसन थ्रियटरमा नलिइ वार्डमै मनिषाको जटिल अप्रेसन सफल भयो र उनले पुर्नजन्म पाइन् । जुन डा.राजिव शाहले सम्झीने घटना हो । मनिषलाई बचाइदिएकोमा उनका परिवार निकै खुसी छन् । हामीले आसै मारिसकेका थियौ । तर डाक्टर भगवान बनेर आएको भन्दै परिवारले धन्यबाद दिए ।
त्यस्तै २०७५ सालमा मुगुकी सुपुत्रा हमालको पाठेघर फुटेर अत्यधिक रगत बग्यो । जिउ काप्ने संगै पिसाबमा रगत देखिएपछि उनको अबस्था जटिल थियो । ततल्काल शल्यक्रिया गरेर ११÷१२ प्वाइन्ट रगत नदिए उनको मृत्यु निश्चित थियो । प्रतिष्ठानमा अहिले पनि छैन् पहिला पनि ब्लड बैंक थिएन् । त्यतिबेला डाक्टर विनोद र आफुले हमालको शल्यक्रिया गरी ४÷५ घण्टामै १२ पोका रगत व्यवस्थापन गरी सुपुत्राले पनि पुर्नजन्म पाईन् ।
उदाहरणका लागि सुपुत्रा र मनिषाले डा. शाहबाट पुर्नजन्म पाएपनि कर्णालीका दुरदराजका सयौ महिलाले डा. शाहबाट पुर्नजन्म पाएका छन् । यदपी ५÷६ वर्ष पहिले मात्र गाउँगाउँमा पुगेर शिविर नचलाएको भए,उपचार नगरेको भए कति महिला अकालमै ज्यान गुमाउन बाध्य हुन्थीन् ।
विगतको तुलनमा कर्णालीको स्वास्थ्य अबस्थामा सुधार भएको छ । यसैमा म खुसी छु । डा. शाहले थपे,“मलाई कमाउने मोह छैन् । कर्णालीमा सेवा गर्न आएको हु । अझै गर्छु । सबैको साथ सहयोगको अपेक्षा राख्दछुु ।”
सुविधा खोज्न सुगम र सेवा दिन दुर्गम आउनुपर्छ भन्ने उदाहरण डा.राजिव जस्तै प्रतिष्ठानका ७० जना विशेषज्ञ डाक्टरहरु पनि हुन् । जसले करोडौ खर्च गरी पढेर सुगममको ठुलो सुविधा नखोजी दुर्गमको सेवा रोजेका छन् ।
कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको अस्पताल निर्देशक रहेका विशषज्ञ डाक्टर शाहले कर्णाली प्रतिष्ठान पछिल्लो समय पश्चिम नेपालकै भरोसा केन्द्रका रुपमा विकसित भएको बताए । कोभिडका कारण प्रतिष्ठानको अध्ययन अनुसन्धान प्रभावित भएपनि उपकरण व्यवस्थापन भएको उल्लेख गरे । कोभिडपछि, ५० बेडको एचडियुको व्यवस्थापन,बच्चाका लागि पीआइसियू ७ बेड तयारी,डाइलासिस सेवा संचालनको तयारी भएको छ ।
अक्सिजन बुस्टर खरिद प्रक्रियामै रहेको छ । भने,थप नयाँ अक्सिजन प्लान्ट ल्याउने तयारी छ । कर्णाली प्रतिष्ठानमा ७० जना विशेषज्ञ डाक्टर, ३० जना मेडिकल अधिकृत सहित साढे ३ सय जना जनशक्ति छन् ।
तर बजेट अभाव, स्रोत साधनको अभावले परिचालन भने हुन सकेको छैन् । कर्णालीमा लामो समयदेखि स्वास्थ्य क्षेत्रमा पुराएको योग्दानको कदर गर्दै सरकारले यसै वर्ष डा.राजिव शाह सुप्रवल जनसेवाश्री पदकबाट विभुषित भएका छन् । कर्णाली प्रतिष्ठानको स्थापनाले कर्णालीको स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार,अध्यायन अनुसन्धानमा टेवा पुगेको छ ।